Oonodoli bezesondo be-TPE abaThengisiweyo Thenga unodoli wothando ophantsi
Leliphi elona xabiso lihle kakhulu nge-TPE sex Doll
I-TPE sex doll zenzelwe ukukunika imvakalelo yokwenyani. Zifaneleke ngakumbi kubathandi boonodoli abatsha okanye oonodoli abanohlahlo lwabiwo-mali oluphantsi. Ngenxa yokuba ulusu lukanodoli wesini owenziwe ngezinto ze-TPE lu-elastic, lugudileyo kunye nokuthungwa njengolusu lomntu lokwenyani. Izinto ze-TPE zinexabiso eliphantsi kune-silicone, kwaye nabantu abaqhelekileyo banokuthenga unodoli wesondo we-TPE ngokwabo. Ngaba ungumlandeli omkhulu woonodoli besini? Ngaba ulusizi ngenxa yokuba awufumani Iidola zoThando oko kukwenza wonwabe? Mhlawumbi awuqinisekanga ukuba yeyiphi idoli ekulungeleyo. Ke xa ufika apha, ungumntu onethamsanqa. Apha ungathenga elona xabiso liphantsi neliphezulu Ukwabelana ngesondo nonodoli we-tpe, olusu lokwenyani luvakala, luyinyani kakhulu. Ikhuseleke kakhulu ebantwini, ingaphakathi lithambo lentsimbi elomeleleyo elinokwanelisa nakuphi na ukuma okufunayo. Sinobuchwephesha obuphezulu obukhethekileyo kunye nobugcisa obugqwesileyo.Ngakumbi unodoli wesondo othambileyo we-tpe olinde ukuba ufumane.
Umgangatho ophezulu we-TPE weSini oDoli Thenga amaxabiso aphantsi
Wamkelekile ukuthenga i-TPE Love Doll.
I-TPE yimathiriyeli ebhetyebhetye kakhulu. Okwangoku isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso ye-tpe sex love doll. Yethu ixabiso eliphantsi lonodoli bezesondo zenziwe nge-silicone ye-TPE yobuchwepheshe obuphezulu (ekwabizwa ngokuba yirabha ye-thermoplastic), ukulinganisa okusondeleyo kolusu lomntu lokwenyani. Zonke iidoli ze-urdoll ziqingqwe ngesandla ngabaphathi abanamava, kwaye zonke iinkcukacha zilungile. Siphumelele ukuqatshelwa kwamawakawaka abathengi ngobuchule, ukuzinikela kunye nesimo sengqondo esinzulu. Siqinisekile ukukunika ezona mveliso zibalaseleyo kunye namava omsebenzisi angcono. Ungalibazisi ukuodola unodoli wakho omdala we-tpe sex. Baya kuza kuwe ngokukhawuleza ukuba bahambe nawe kwaye bakuzise ulonwabo olungenasiphelo. Awunaxhala lokukhalaza kuba zihlala zikonwabisa. Bakulungele. Qala ubomi bakho obonwabisayo kunye Unodoli wesini waseJapan ngoku, nto leyo utyalo inzuzo kakhulu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga noku kulandelayo Anodoli yesini, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngoncedo. Siyavuya ukukunceda.
Ngaba usakhangela unodoli wesondo enokwanelisa iminqweno yakho? Yethu TPE iidoli ezintandathu zenziwa kusetyenziswa izinto eziphambili zehlabathi ze-TPE kunye noyilo oluphezulu lobunewunewu. Izinto ze-TPE zinobuhlobo nokusingqongileyo. Ukuze unciphise ingxaki yokufudumala kwehlabathi, sincoma kakhulu ukuba uthenge iiDoli zethu ze-TPE eziphezulu. Sikubonelela ngenkonzo yokuhanjiswa simahla, unokufikelela kuzo zonke iindawo zehlabathi!
Ividiyo malunga ne-TPE sex doll:
Ukuba uyafuna uku thenga unodoli we-tpe wesondo kwaye ufuna ukwazi iinkcukacha ezingakumbi zedoli, sinevidiyo ekhethekileyo ye-doll factory, nceda ujonge ngokucophelela, uya kufumana iinkcukacha ezininzi ezinomdla.